Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa Jimcihii diidday dacwad uu gobolka Texas u gudbiyay oo lagu doonayay in lagu laalo natiijadii codbixinti gobollada Georgia, Michigan, Pennsylvania, iyo Wisconsin oo uu Biden ku guuleystay.
Go’aan kooban oo ka soo baxay Maxkamadda Sare ayaa lagu sheegay in gobolka Texas uusan sharci u laheyn inuu dacwad ka keeno kiis ka dhan ah gobollada Georgia, Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin.
Kiiskan ayaa waxaa talaadadi Maxkamadda Sare u gudbiyay Xeer-ilaaliyaha guud ee gobolka Texas oo ah Jamhuuri. Isla markiiba waxaa taageeray kiiska xeer ilaaliyaasha 19 gobol oo ka mid gobollada Mareykanka iyo 129 mudane oo Jamhuuri ah oo ka tirsan Congress-ka.
Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa waxaa qaadi ka ah 9 garsoore oo 6 ka mid ahi yihiin muxaafid. Saddex ka mid ah waxaa magacaabay Trump, midkoodna kama uusan hadlin dacwaddaan.